( MMnix - လွယ်ကူမြန်ဆန် သတင်း ဖတ်ရန် ) Myanmar News & Information Exchange"
× ဒီနေ့ နောကျဆုံးရ မနကေ့ ပွညျတှငျး ပွညျပ LifeStyles WebTV အားကစား နညျးပညာ English ငှလေဲနှုနျး ဆကျသှယျရနျ
Latest WebTV News!
ဟန်ထူးဈာန် ရဲ့ CELEBRITY အခွေ DVD Karaoke စာနယ်ဇင်း မိတ်ဆက် MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
အဆိုတော် ဟန်ထူးဈာန် ရဲ့ CELEBRITY တစ်ကိုယ်တော် တေးသီချင်းအခွေ DVD Karaoke ထွက်ရှိခြင်း စာနယ်ဇင်း မိတ်ဆက်ပွဲကို ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊Orchid Hotel မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ The press launch of Singer Han Htoo Zan\_'s solo music album, titled Celebrity, was held at the Orchid Hotel in Yangon. #HanHtooZan #MyanmarSinger
မုန်း ဗီဒီယိုဇာတ်ကား ရိုက်ကွင်းမှ သရုပ်ဆောင် လူမင်း၊ ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ သုဝဏ္ဏမှာ ဒါရိုက်တာ စွမ်းပိုင် ရိုက်ကူးပုံဖော်နေတဲ့ မုန်း ဗီဒီယိုဇာတ်ကားမှ သရုပ်ဆောင် လူမင်း၊ ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း တို့နှင့် ခဏတာ။ Lu Min & Saung Eaindray Htun star in Mhome movie by director Swan Paing. #LuMin #SaungEaindraHtun #MyanmarMovieMaking
တိမ်တိုက်တံတား ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ပရိုမိုးရှင်းပွဲမှ အနုပညာရှင်များ MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
ဒါရိုက်တာ သြရသ ရိုက်ကူးထားတဲ့ တိမ်တိုက်တံတား ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား Promotion ပွဲကို ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Junction City မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ အဓိကပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားကြတဲ့ ထွန်းထွန်း၊ ခင်ဝင့်ဝါ နှင့် ဗီယက်နမ် အလှမယ် Nguyen Tran တို့က ပရိသတ်နဲ့ တွေ့ဆုံလက်မှတ်ထိုး ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ The fans meeting & promotion of Bridge of Clouds movie was held on July 15, 2018 at the JCGV Junction City in Yangon. #KhinWintWah #NguyenTran #MyanmarMovie #TunTun
ဒီနှစ်ထဲမှာ တစ်ကိုယ်တော် သီချင်းအခွေထွက်မယ် ဆိုတဲ့ Bobby Soxer MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
ဒီနှစ်ထဲမှာ တစ်ကိုယ်တော် သီချင်းအခွေ ထွက်ဖို့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအခွေအတွက် တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် သီချင်းရေးနေပါပြီ လို့ပြောလာတဲ့ အဆိုတော် Bobby Soxer နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Singer Bobby Soxer says she is perparing for her solo music album. #BobbySoxer #MyanmarSinger
အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိပေမယ့် အနုပညာအလုပ် ပြန်လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ ပြည့်ဖူးခိုင် MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
အနုပညာလောကထဲ ပြန်ဝင်လာတဲ့ အခါ အသစ်တစ်ယောက်လိုပဲ အဆင်မပြေမှုတွေရှိပေမယ့် အတတ်နိုင်ဆုံး သည်းခံမျိုသိပ်ပြီး အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေပါတယ် လို့ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ပြည့်ဖူးခိုင် နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Former Well-known Actress, Pyae Phoo Khiang #MyanmarActress #PyaePhooKhiang
လူတခြား ပစ္စည်းတခြား ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ ဆီလီကွန် မထည့်ဘူး ဆိုတဲ့ နန်းနန်း MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
Online မှာ ပြန့်နေတဲ့ ဖက်ရှင်ဝတ်စုံရဲ့ ဖော့ခွက် အရောင်က အသားရောင်မို့ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်နေကြတာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အရှိအတိုင်း ခန္ဓာကိုယ်ကို သဘောကျပါတယ်။ လူတခြား ပစ္စည်းတခြား ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ ဆီလီကွန်ထည့်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိပါဘူး ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် နန်းစန္ဒာလှထွန်း နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Actress Nang Sandar Hla Htun reacts the criticism on her fashion. #NangSandarHlaHtun #MyanmarActress
နယ်က ပရိသတ်တွေက အရမ်းအားပေးကြလို့ ပီတီတွေဖြာနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေး MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
တကယ်ချစ်စရာကောင်းအောင် က ရင်လည်း က တတ်ပါတယ်။ ဗြဲလရမ်း က ကွက်တွေ တီထွင်နေတာပါ။ Facebook ကို အကျိုးရှိအောင် သုံးမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အရာတွေ၊ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ် လို့ပြောလာတဲ့ Facebook Cele ဖြူဖြူထွေး နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Facebook Cele, Online Comedian, Phyu Phyu Htwe #MyanmarFaecbookCele #PhyuPhyuHtwe
ကွယ်လွန်သူ ဦးရဲလွင် (မဇ္ဈိမလှိုင်း) ရဲ့ နောက်ဆုံး ခရီးမြင်ကွင်း MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
ဇူလိုင်လ (၁၀) ရက်နေ့က အသည်းကင်ဆာ ရောဂါဖြင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ဦးရဲလွင် (မဇ္ဈိမလှိုင်း) ရဲ့ ဈာပန အခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ(၁၄) ရက်နေ့က ရန်ကုန် ရေဝေး သုဿန်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Myanmar Celebrity Update: Singer U Ye Lwin\_'s funeral was held on July 14, 2018. #MyanmarCelebrity #UYeLwin
၀ိုင်းကြီးချုပ် စပွန်ဆာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အထူးပွဲ ပြသ MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
ဒါရိုက်တာ သြရသ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ၀ိုင်းကြီးချုပ် စပွန်ဆာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အထူးပွဲကို ဒီကနေ့ ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ ခန့်စည်သူ၊ ဇေရဲထက်၊ ခင်လှိုင်၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ ရွှေမှုံရတီ၊ ဂွမ်းပုံ တို့က အဓိကပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ The press screening of Wyne Gyi Gyoke Sponsor movie was held on July 15, 2018 at the President Cinema in Yangon. #KhantSiThu #KhinHlaing #SoeMyatThuzar
သင်တို့ရဲ့ အသည်းတွေကို ဂရုစိုက်ပါ ရိုက်ကွင်းမှ အောင်ရဲလင်း MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ သုဝဏ္ဏမှာ ဒါရိုက်တာ လူမင်း ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ သင်တို့ရဲ့ အသည်းတွေကို ဂရုစိုက်ပါ ပညာပေးဇာတ်လမ်းတို ရိုက်ကွင်းမှ လူမင်း၊ အောင်ရဲလင်း တို့နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Actor Aung Ye Linn at Taking Care of Your Liver awareness campaign short film making by director Lu Min. #LuMin #MyanmarFilmDirector #AungYeLinn
Miss Myanmar World 2018 အလှမယ် သရဖူကို ဟန်တီ က ဆွတ်ခူး MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ရေကူး အသံလွှင့်စက်ရုံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss Myanmar World 2018 Grand Final အလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှာ ခါးနံပါတ်-3အလှမယ် ဟန်တီ က Winner Award သရဖူ ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။ 21 year old Han Ti was crowned Miss Myanmar World on July 14, 2018. Next, she will start preparing to represent Myanmar at Miss World 2018 this November and December in Sanya. #MissMyanmarWorld #HanTi
Miss Myanmar World 2018 အလှမယ်ပြိုင်ပွဲ Grand Final MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
Miss Myanmar World 2018 Grand Final ကို ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ရေကူးအသံလွှင့်စက်ရုံ မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Winner သရဖူဆုကို ခါးနံပါတ်-3အလှမယ် ဟန်တီ က ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး၊ 1st Runner Up ဆုကို လင်းကလျာဦး နှင့် 2nd Runner Up ဆုကို ယမုံ တို့က ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Miss Myanmar World 2018 Grand Final was held on July 14, 2018 in Yangon. Han Ti was crowned Miss Myanmar World. #HanTi #MissMyanmarWorld
Myanmar Celebrity အနုပညာနေ့စဉ် သတင်း - ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက် MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်နေ့ အတွက် Myanmar Celebrity အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း.... 1. အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အလိုမတူဘဲ အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြင့် အတိုင်ခံထားရတဲ့ သီဟတင်စိုး 2. ဝေဖန်ပိုင်ခွင့် ရှိပေမယ့် မဟုတ်မမှန်ပြောရင် တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် 3. အသည်းကင်ဆာ ရောဂါ နဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ဦးရဲလွင်(မဇ္ဈိမလှိုင်း) ရဲ့ ဈာပန 4. မိုရီဆာကီဝင်း က Talent ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါဆိုတဲ့ အောင်ရဲလင်း 5. Project K ဘုန်းနေလင်း နဲ့ အလှမယ် ယွန်းဝင့်လွှာအောင် တို့ စုံတွဲ နှင့် အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ အနုပညာသတင်းများ စုစည်း တင်ဆက်မှု။ Myanmar Celebrity Daily News: #ThihaTinSoe #AungYeLinn #ThinzarWintKyaw #EintChit #ShweMhoneYati #ZayYeHtet #MyanmarCelebrityNews
မေခလာ ရဲ့ LIVE Music With MAY KHA LAR ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
အဆိုတော် မေခလာ ရဲ့ LIVE Music With MAY KHA LAR ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက်နေ့က 369 Rooftop Bar, ibis styles Hotel ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ The Live Music with May Khalar music show was held at the 369 Rooftop Bar, ibis Hotel in Yangon. #MayKhalar #MyanmarSinger
ချစ်သူတွေဖြစ်တာ တစ်နှစ်ခွဲရှိပြီ ဆိုတဲ့ ဘုန်းနေလင်း နဲ့ ယွန်းဝင့်လွှာအောင် MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
ချစ်သူသက်တမ်း တစ်နှစ်ခွဲကျော်ပါပြီ ၊ကျနော်တို့ Relationship က လျှိုထားတာမျိုးမရှိပါဘူး Project K ကိုအားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေဆို သိပါတယ် လို့ပြောလာတဲ့ ဘုန်းနေလင်း (Project K) ၊ ယွန်းဝင့်လွှာအောင် တို့ ချစ်သူနှစ်ဦး နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Relationship: Well-known Dancer #BhoneNayLin (#ProjectK) & Miss Now How 2017 #YoonWintHlwarAung
LGBT တွေကို အားပေးပါတယ် ဆိုတဲ့ အလှမယ် Bella MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
LGBT တွေကို အားပေးပါတယ်။ လူအချင်းချင်း ချစ်ကြတဲ့ အချစ်တွေပဲမို့ အားပေးပါတယ်။ သူတို့ကိုလည်း Support လုပ်သွားမယ် လို့ပြောလာတဲ့ Miss Myanmar World 2016 အလှမယ် Bella/ မြတ်သီရိလွင် နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Bella, Miss Myanmar World 2016, comments on LGBT rights in Myanmar #Bella #MissMyanmarWorld
Balance Fitness3ဖွင့်ပွဲမှ ပွဲတက် အနုပညာရှင်များရဲ့ ဖက်ရှင် MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
ရန်ကုန်၊ အလုံလမ်းမပေါ်ရှိ Balance Fitness3Gym ဖွင့်ပွဲကို ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည်။ နာမည် အနုပညာရှင်များ တက်ရောက် အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ The grand opening of Balance Fitness3Gym was held on July 14, 2018 on the Alon Street in Yangon. #MyanmarFitness #BalanceFitness3 #ThinzarWintKyaw #ShweThamee
အရုပ်မလေးနဲ့ တူတဲ့ ရွှေရည်သုန်သုန် ရဲ့ မျက်နှာက ခွဲစိတ်ထားတာလား။ MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
သုန်သုန့် မျက်နှာကို အရုပ်မနဲ့တူတယ်၊ ခွဲစိတ်ထားတာလား လို့ အမြဲမေးကြတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ဘာမှမလုပ်ထားပါဘူး လို့ပြောလာတဲ့ မော်ဒယ် နှင့် သရုပ်ဆောင် ရွှေရည်သုန်သုန် နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update : New Face Model & Actress, Shwe Yee Thone Thone #ShweYeeThoneThone #MyanmarActress
ဇာတိမြေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အောင်ရဲလင်း MMCelebrity ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
ဇာတိမြေ ဇာတ်ကားကို ကျနော့်ဆရာ မကြည်ဖြူသျှင် ရိုက်တာကြောင့် ကျနော် ပိုပြီးတော့ ထိထိမိမိ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားထားတယ်၊ နိုင်ငံတော်ကား ဆိုတော့ သတိထားပြီး ကာရိုက်တာကို သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် လို့ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် အောင်ရဲလင်း နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Well-known Actor Aung Ye Linn talks about My Country.. My Home movie #AungYeLin #MyanmarActor
ယာမြေ (၆၄)ဧကကို စီမံကိန်း မပြုလုပ်သဖြင့် ပြန်စွန့်လွှတ်ပေးရန် ElevenMedia ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
အမှတ်(၂) တပ်မတော်အကြီးစားစက်ရုံမှ သိမ်းယူခဲ့သည်ဆိုသည့် သာစည်မြို့နယ်မှ ယာမြေ (၆၄)ဧကကို စီမံကိန်း မပြုလုပ်သဖြင့် ပြန်စွန့်လွှတ်ပေးရန် အကြိမ်ကြိမ် တင်ပြသော်လည်း မထူးခြားဟု ဒေသခံများ ဆို (ရုပ်သံ) သာစည်မြို့နယ် ၊ ယင်းမာပင်ကျေးရွာ အုပ်စု အတွင်းရှိ တောင်သူ (၁၈)ဦး ပိုင် ယာမြေဧက (၆၄)ဧက ကို အမှတ်(၂)တပ်မတော်အကြီးစား စက်ရုံ(တကစ-၂)က ၂၀၀၃/၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်းသိမ်းဆည်းသွားပြီး မည်သည့် စီမံကိန်း မှ ဆောက်လုပ်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း မရှိပဲ တောရိုင်းမြေအဖြ စ်တည်ရှိနေတာကြောင့် ပြန်လည်ရယူလိုကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် တင်ပြခဲ့ပေမယ့် ထူးခြားမှု မရှိဘူးလို့ ဒေသခံ တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။
နဗီဆီးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦး အသက်ပေးသွားသည်ဆိုသည့်သတင်း ElevenMedia ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
ထမ်လွန်ဂူကယ်ဆယ်ရေးအတွင်း ထိုင်း နေဗီဆီးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦး အသက်ပေးသွားသည်ဆိုသည့်သတင်းကို ကြားချိန်တွင် ထိုင်းကျောင်းသားအဖွဲ့ ၀မ်းနည်းငိုကြွေးခဲ့ (ရုပ်သံ) ထမ်လွန်ဂူထဲက သူတို့ကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ နေဗီဆီးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကို ကြားတဲ့အခါ ထိုင်းကျောင်းသားအဖွဲ့က ၀မ်းနည်းငိုကြွေးခဲ့တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ပြောပါတယ်။
ဒေါနတောင်ကျော် အာရှလမ်းသစ်တွင် မော်တော်ယာဉ်များ ပုံမှန်သွားလာနိုင် ElevenMedia ရုပ်သံ သတင်း *** (2018-07-15)
လမ်းပိတ်မှုဖြစ်ခဲ့သော မြ၀တီ-ကော့ကရိတ် ဒေါနတောင်ကျော် အာရှလမ်းသစ်တွင် မော်တော်ယာဉ်များ ပုံမှန်သွားလာနိုင်ပြီဖြစ် (ရုပ်သံ)
( အဖွင့် စာမျက်နှာ )
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
Report an Issue or Any request? Please contact here.